Kenyaan dalbaday in la sii daayo wiilashooda oo ay ku jiraan Meleteri laguna haysto Soomaaliya – Radio Daljir
Agoosto 6, 2013 3:59 b 0
Nairobi, Aug 6, 2013 – Waxaa sii kordhaysa cabashada ay muujinayaan dadka Kenyaanka ah ee wiilashooda lagu haysto qeybo ka mid ah Soomaaliya, kuwaasi oo gacanta ugu jira ururka Al-shabaab ee ka dagaalama koonfurta dalka.
Idaacada Capital FM ee magaalada Nairobi ayaa shalayto baahisay codadka waalidiin Kenyaan ah kuwaasi oo laga haysto wiilal ay dhaleen oo laga afduubtay gobolka woqooyi Bari ee dalkaasi Kenya.
Lahaystayaasha ku jira gacanta kooxda Al-shabaab ee ka dagaalanta koonfurta dalka ayaa waxaa ku jira Evans Mutoro iyo Jonathan Kangogo oo ka tirsan Meleteriga Kenya, waxaana laga afduubtay meel ku dhow magaalada Wajeer.
Evans Mutoro Aabihiis ayaa la hadlay warbaahinta gudaha Kenya, wuxuuna ka dalbaday dowladda Kenya in ay wadda-hadal la furto kooxda Al-shabaab ee gacanta ku haya wiilkiisa Mutoro oo Al-shabaab gacanta ugu jira 2 sano.
? Gaashaandhiga Kenya ayaa isoo wacay waxayna ii sheegeen in aan qaato mushaarka wiilkayga xiran ee Meleteriga ka tirsanaa, sidoo kale wasaaradu waxay ii sheegtay hadii wiilkiisa la waayo 7 sano in lagu tiring doono dadka geeryooday? ayuu yiri Aabaha dhalay Mutoro.
Waxaa haatan gacanta Al-shaaab ku jira 4 la hayste oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan Meleteriga dalkaas, waalidiintu waxay sheegeen in aysan wax war ah ka helin wiilashooda afduubka loogu haysto Soomaaliya, rajada waalidiinta ayaa soo noqotay markii dhowaan la sii daayey Kenyaan ku jiray gacanta Al-shabaab.